Koloiko sy Hajaiko ny Teniko | Sora-mandry
Ireto ny fitsipika arahina rehefa mampiasana sora-mandry.
1 - Ny lohatenina tantara foronina, na ireo karazana tantara lava sady feno dia atao sora-mandry. Ny lohatenina tononkalo, sombintantara, lahatsoratra an-gazety, lahatsoratra fanadihadiana, ary lohatenin'ireo fizarazarana amin'ny tantara mifampitohitohy amin'ny fahitalavitra kosa dia atao anaty farango sosona.
- Mahafinaritra ahy ny mamaky ilay boky Ny Zanako. (Tantara foronina.)
- Ilay tononkalo Hafatrafatra sy ilay sombintantara Ny Faniriako no nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana.
2 - Ny lohatenina teatra, sarimihetsika, fandaharana amin'ny onjam-peo na fahitalavitra, ary kabary malaza dia atao sora-mandry.
- Efa nivoaka tamin'ny herinandro ilay sarimihetsika Benja Kely.
- Iza avy no vahiny tao amin'ny Don-dresaka? (Fandaharana amin'ny fahitalavitra.)
3 - Ny anarana gazety dia atao sora-mandry.
- Nivoaka tao amin'ny gazety Free News androany ilay fanadihadiana.
- Nisy gazety maromaro nipetraka teo ambonin'ilay latabatra kely tao amin'ny efitrano fiandrasana. Noraisiko ny Midi sy ny Taratra, ary ny Lakroan'i Madagasikara.
4 - Ny anarana fiara dia atao sora-mandry.
- Ilay fiara Mercedes no nentiny tany am-piasana androany.
- Misy karazana Ferrari maromaro milahatra ao amin'ny garaziny.
5 - Rehefa mitantara eritreritr'olona dia atao sora-mandry.
Lasa aiza ary izy teo? hoy i Ravo anakapo.
6 - Rehefa mitantara feon-javatra, na feo avoakana biby dia atao sora-mandry.
- Vroomm! hoy ny feon'ilay fiara nandalo nirifatra teto akaikiko teto.
- Nofelahako mafy ny tavany fa tezitra aho! Slap!
7 - Rehefa misy teny tiana hamafisina dia atao sora-mandry.
- Mila tonga ara-potoana ny mpikambana rehetra.
- Rehefa manoratra ianao dia araho daholo ny fitsipika rehetra mifehy ny fanoratana.
8 - Rehefa manao sora-mandry dia atao sora-mandry koa ny baraingo na tsoraka ao aorian'ilay teny raha toa ka mikambana aminy ilay mari-piatoana. Amin'ireto ohatra eto ambany ireto izao dia ilay tsoraka eo amin'ny fehezanteny voalohany ihany no mila atao sora-mandry satria mikambana amin'ny ianao.
- Ianao mihitsy no tena tadiaviko, ianao!
- Efa novakianao ve ilay lahatsoratra tao amin'ny gazety Midi?
9 - Raha toa ianao ka voatery hanoratra teny vahiny eny antsefatsefany eny dia ataovy sora-mandry ilay teny vahiny. Ezaho arak'izay azo atao anefa ny hanoratra teny Malagasy rano iray rehefa manoratra.
- Nampidiriko ao anaty kitapo ao ilay chargeur.
- Nahaliana ilay face à face teo amin'ireo kandidà.